Uyakha njani iphulo lokuzibandakanya kwakhona kwabaBhalisi abangasebenziyo | Martech Zone
Kutshanje sabelane nge-infographic ngendlela yokwenza ukuguqula umlinganiso we-imeyile yokuzibandakanya, kunye neemeko ezithile zophononongo kunye neenkcukacha zamanani ezinokwenziwa malunga nabo. Le infographic evela kwiimonki ze-imeyile, Ukubuyisela ii-imeyile kwakhona, iyithatha iye kwinqanaba elisezantsi leenkcukacha ukubonelela ngesicwangciso sokwenyani sokuguqula ukubola kokusebenza kwe-imeyile.
Uluhlu oluqhelekileyo lwe-imeyile lubola nge-25% minyaka le. Kwaye, ngokuka Ingxelo yeNtengiso kaSherpa ka-2013, Iipesenti ezingama-75 zababhalisi be-imeyile azisebenzi.
Ngelixa abathengisi bengayinanzi indawo yabo eleleyo yoluhlu lwabo lwe-imeyile, abayihoyi imiphumo. Iqondo lokuzibandakanya eliphantsi libuhlungu amazinga okubekwa ebhokisini, kunye nee-imeyile ezingasetyenziswanga zinokuphinda zifunyanwe zii-ISPs ukuseta imigibe yokuchonga abathumela imiyalezo! Oko kuthetha ukuba ababhalisile abangasebenziyo banefuthe lokuba ingaba ababhalisile bakho be-imeyile ababonayo bayazibona ii-imeyile zakho.
Ukumisela iphulo lokuzibandakanya kwakhona
Icandelo Ababhalisi abangakhange bavule, bacofe okanye baguqule uluhlu lwakho lwababhalisi be-imeyile kunyaka ophelileyo.
Qinisekisa i iidilesi ze-imeyile zelo candelo ngokusebenzisa i Inkonzo yokuqinisekisa nge-imeyile.
thumela I-imeyile ecacileyo necacileyo ecela umrhumeli angene kwakhona kuluhlu lwakho lokuthengisa nge-imeyile. Qinisekisa ukukhuthaza izibonelelo zokufumana i-imeyile yakho.
Yima iiveki ezimbini kwaye ulinganise impendulo ye-imeyile. Eli lixesha elaneleyo labantu abakwiholide okanye abafuna ukucima ibhokisi yabo engenayo kunye nokwenza umyalezo wakho.
Ukulandelisa ngesilumkiso sesibini sokuba umrhumeli we-imeyile uza kususwa kulo naluphi na unxibelelwano ngaphandle kokuba baphinde bangene. Qinisekisa ukukhuthaza izibonelelo zokufumana unxibelelwano nge-imeyile kwinkampani yakho.
Yima ezinye iiveki ezimbini kwaye ulinganise impendulo ye-imeyile. Eli lixesha elaneleyo labantu abakwiholide okanye abafuna ukucima ibhokisi yabo engenayo kunye nokwenza umyalezo wakho.
Ukulandelisa ngomyalezo wokugqibela wokuba umrhumeli we-imeyile ususiwe kulo naluphi na unxibelelwano ngaphandle kokuba uphinde ungene kwakhona. Qinisekisa ukukhuthaza izibonelelo zokufumana unxibelelwano nge-imeyile kwinkampani yakho.
Iimpendulo Ukukhetha ukungena kwakhona kufuneka kubulelwe kwaye ungade unqwenele ukubacela ulwazi malunga nento enokubenza bazibandakanye nzulu negama lakho.
engasebenziyo Ababhalisi kufuneka basuswe kuluhlu lwakho. Nangona kunjalo, unokuba unqwenela ukubasusa kwiphulo lokuphinda ujonge kumajelo asekuhlaleni, okanye nakwiphulo lokuthengisa ngokuthe ngqo ukuze ubabuyisele!
I-infographic evela kwiiMonks ze-imeyile ikwabonelela ngeendlela ezilungileyo zokwandisa amathuba okufumana ababhalisile abangasebenziyo kwakhona:
tags: i-imeyile infographicUluhlu lwe-imeyileUluhlu lwe-imeyile lubolaUluhlu lokugcina i-imeyileiimonki ze-imeyileukungena kwe-imeyileumkhankaso we-imeyileUmrhumo we-imeyile wokuzibandakanya kwakhonaemailmonkskwenziwa kanjaniIphulo lokuzibandakanya kwakhonaUkubandakanya kwakhona i-imeyile
Ungawusebenzisa njani amaxabiso e-Algorithmic ukunyusa inzuzo